Banye na Microsoft ID na Windows 10 | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na ịnwale ụdị nke Windows 10 kachasị ọhụrụ, ị nwere ike ịnụrịrịrịrị ụfọdụ ọrụ Microsoft nyere maka nke a nyocha ka ewepụtara ya n'etiti 2015.
Na-enweghị ikewepụ ihe ọ bụla na arụmọrụ ndị a na Windows 10, otu n'ime ihe kachasị mkpa dị na mmekọrịta nke sistemụ nrụọrụ a na Microsoft ID, ihe nwere ike ịbụ nke anyị ga-eji nweta akaụntụ Hotmail ma ọ bụ Outlook anyị. Ugbu a, ọ bụrụ na anyị achọghị ka mmekọrịta a ma ọ bụ njikọ a rụọ ọrụ, anyị nwere ike ịmegharị ya n'ụzọ dị mfe site na ntakịrị aghụghọ.
Banye na NJ Microsoft anyị na Windows 10
Usoro a dị mfe karịa ka onye ọ bụla nwere ike iche n’echiche, ebe ọ bụ naanị na ị ga-ejigharị ụfọdụ bọtịnụ ndị na-adị mgbe niile na Microsoft ekwutụbeghị. Ozugbo ị banyere Windows 10 ma nọrọ na desktọọpụ, naanị ị ga -
Pịa na bọtịnụ mmalite Windows 10.
Ikwesiri ịchọta aha profaịlụ gị n'elu.
You ga-ahọrọ ha.
Site na menu ihe omume ị ga-ahọrọ nke ga - enyere gị aka imechi nnọkọ ahụ.
O doro anya na usoro ndị a niile ị ga-arụ oge ọ bụla ịbanye na Windows 10 ma ọ bụrụ na ịchọkwaghị njikọ gị na akaụntụ Hotmail gị ma ọ bụ Outlook, na sistemụ arụmọrụ a.
Ọ bụ ezie na enweghị ezigbo ihe kpatara iji pụọ na Microsoft ID na Windows 10, mana anyị nwere ike ịchọ ụfọdụ nzuzo n'ihe gbasara ihe anyị ga-eme na sistemụ arụmọrụ a, nke nwere ike ịgụnye nleta anyị na ụlọ ahịa ahụ wee cheta, na site na Windows 8.1 Microsoft nwere ikike idekọ ọrụ anyị n'ime sistemụ arụmọrụ, n'ụlọ ahịa gị, na ikekwe n'ihe ọ bụla anyị ji igwe nchọta Bing gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Esi esi na Microsoft ID na Windows 10 pụọ
Orland jupụtara dijo
Daalụ, magburu onwe ya. Ọ na-arụ ọrụ na mmeri 10
ọ naghị arụ ọrụ, ọ na-eme mkpọka na-ajụ gị ka ịbanye na paswọọdụ ¬¬
Benjamin ziri ezi ka m na-eme iji weghachite nke dị ugbu a, achọghị m ka paswọọdụ pụta n'ihi na ụmụnne m batakwara ma ha rịọ maka okwuntughe m, nyere m aka
Amaghị m ma m kọwara onwe m, onye ọlụlụ m na ndị ezinụlọ m na-eji laptọọpụ m na m nwere ike ibinye ya onye ọ bụla. Yabụ na ọ dị nzuzu ma enweghị ntụkwasị obi na ha nwere ike ịnweta email m ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta ... ma ọ bụ nke ka njọ na ịbanye dị ka onye ọrụ nkeonwe ha ga-abanye aha njirimara na paswọọdụ na ihe niile na-akpata nsogbu ...
dị ka m na-eme iji wepu ozi m na netwọkụ mmekọrịta, nke ahụ bụ ịsị na mgbe m gbanye kọmputa m, ọ naghị ajụ m maka okwuntughe. Ka o sina dị, olee otú ọ dị na mbido
Iji pụọ Microsoft Id:
Bido / nhazi.
Akaụntụ (Akaụntụ, email, mmekọrịta, ọrụ, ndị ọrụ ndị ọzọ).
N'aka ekpe pịa: E-mail gị na akaụntụ gị.
Mgbe ahụ n'akụkụ aka nri: Bata na akaụntụ mpaghara ebe gị.
Are ga-ajụ maka paswọọdụ nke NJ, pịa ỌZỌ.
Window mepere iji tinye aha njirimara na paswọọdụ (nke a abụghị iwu). Pịa ỌZỌ ma pịa:
Mechie OZI na nnata.
Zaghachi Gregorio Cabañas
Ekele dịrị gị, aha m, aha nna ma ọ bụ email na-egosi mgbe m banyere. N'ezie, ọbụlagodi maka m, ọ bụ ihe ihere ịnweta ozi m mgbe m banyere, daalụ! ^^
Chọpụta banyere ikike dijitalụ kachasị mma.
Zaghachi Paulo Davi Lucas
TalkHelper: chekwaa oku vidiyo nke Skype